गोल्डेन बुट कसले जित्ला ? यी हुन मुख्य दाबेदारहरु
काठमाडौं, २९ जेठ । यही जेठ ३१ गते अर्थात पर्सी बिहिबारदेखि एक महिनासम्म चल्ने २१औं संस्करणको फिफा विश्वकपमा ३२ देशले उपाधिका लागि भिडन्त गर्दैछन्। ६४ खेल हुने प्रतियोगिताको फाइनल असार ३० गते हुनेछ। उपाधि कसले उचाल्छ भन्नेबारे प्रशंसकहरूको अड्कलबाजी चल्न थालेको छ।
यसबाहेक गोल्डेन बुट कसले जित्ला भन्नेबारे पनि अड्कल बाजी देखिन थालेको छ। प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडीलाई फिफाले गोल्डेन बुट प्रदान गर्नेछ।
हेर्नुहोस् को-को छन् गोल्डेन बुटका दाबेदार
मेसीः अर्जेन्टिनाका स्टार मेसी यसपटक फर्ममा छन्। गोल्डेन बुटका प्रमुख दाबेदारका रूपमा मेसीलाई लिन सकिन्छ। यो सिजनमा मेसीले ४७ गोल गरिसकेका छन्। ला लिगामा मात्र उनले ३४ गोल गरेका थिए। पछिल्लो विश्वकपमा मेसीले ७ खेलबाट ४ गोल गरेका थिए।
रोनाल्डोः पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो २ वर्षअघि युरोकप उपाधि दिलाउँदै टिमलाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जिताएका थिए। क्लव फुटबलमा पनि फर्ममा रहेका रोनाल्डोलाई केहीले गोल्डेन बुटको दाबेदारको रूपमा हेरेका छन्।
ह्यारी केनः इग्ल्याण्डका ह्यारी केनलाई पनि यस पटक गोल्डेन बुटको दाबेदारका रूपमा लिइएको छ।पहिलो पटक विश्वकप खेल्न लागेका उनी उत्कृष्ट फर्ममा छन्। उनले यो सिजन ५० खेलबाट ४३ गोल गर्दै आफूलाई बलियो दाबेदार बनाएक छन्।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीका स्टार थोमस मुलर पनि गोल्डेन बुटका दाबेदार हुन्। सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको विश्वकपमा २० वर्षकै उमेरमा मुलरले यो अवार्ड जितेका थिए।
एन्टोइन ग्रीजम्यानः फ्रान्सका एन्टोइन ग्रीजम्यानलाई पनि यस पटक गोल्डेन बुटको दाबेदारको रूपमा लिइएको छ।एथ्लेटिको मड्रिडबा क्लब फुटबल खेल्ने यी स्टारले हरेक सिजन औषत २८ गोल गर्दै आएका छन्।
नेइमारः लामो समय खुट्टामा चोट बोकेर मैदान बाहिर रहेका ब्राजिलियन स्टार नेइमार खेलमा फर्किसकेका छन्। धेरैले उनलाई यसपटक उत्कृष्ट खेल्ने विश्वास लिँदै गोल्डेन बल जित्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
२६ वर्षीयको नाममा ५३ अन्तर्राष्ट्रिय गोलको रेकर्डसमेत छ। यो उमेरमा यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा ब्राजिलकै पूर्व खेलाडी पेले, रोनाल्डो र रोमारियो थिए।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा एमाले विजयी
मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन हेर्न अलग्गै शाखा
मोडल रुबिना सोलमारिमा नसाको तालमा-भिडियो सहित
अव चाडै सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि वढने शर्माको दाबी
नेपालमा राजनीतिक खतरा ! के भन्छन वौद्धिक समुदाय ?(भिडियो रिपोर्ट)
रेशम चौधरीसहित २४ कैदीबन्दीको जीवनरक्षाका लागि आयोगको आग्रह
कुरीति र परम्पराको अन्त्य गरौँ – राष्ट्रपति
७०प्रतिशतभन्दा बढि मत खस्छ, चार दिनभित्रै ३३४ वटै स्थानको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्छौं : निर्वाचन आयोग